Abel Rakotozanany : niraradraraka ny fanomezam-boninahitra | NewsMada
Abel Rakotozanany : niraradraraka ny fanomezam-boninahitra
Olomanga tokoa… Tamin’izy tojo tsy fahasalamana efa nisy ny fifanentanana nataon’ireo havana, namana, mpiara-miasa tamin’i Abel Rakotozanany. Samy naneho ny alahelo ary nanome voninahitra sy nahatsiaro ny rehetra vitany kosa ny rehetra, vantany vao naheno ny fodiamandriny, ny alarobia lasa teo.
« Tso-piainana, masiaka amin’ny asa, malala-tsaina », hoy ny filazan’i Harrison Ratovondrahona, izay mpanolotra ny fandaharana « Mbarakaly », taty aoriana. Nitobaka, toy izany koa ny tsiaro sy ny fanomezam-boninahitra avy amin’ireo mpanakanto marobe, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo nanao izany tao amin’ny « Facebook », toa an-dry Rossy, Charles Kely, Bekoto Mahaleo, sns.
Nahatsiaro ny soa norantovina taminy ihany koa ireo mpianatr’i Abel Rakotozanany, teo amin’ny sehatry ny haino aman-jery. Ankoatra ny maha mpiasan’ny fahitalavitra TVM nanomboka ny taona azy mantsy, nampianatra tamina oniversite tsy miankina maromaro ihany koa izy.
65 taona izy nindaosin’ny fahafatesana izao. Manan-janaka telo lahy, nahazo ny mari-pahaizana « maitrise en sociologie », avy eo niditra nianatra tao amin’ny TVM tamin’ny taona 1973. Nianatra tany amin’ny INA Paris ny taona 1974, ka nahazo ny diplaoma maha mpanatontosa. Nanomboka ny taona 1984 izy no nanatontosa ny fandaharana “Mbarakaly”. Araka ny vaovao nampitain’ny akaiky azy hatrany, hotontosaina anio ny fandevenana, eny Ambohimangakely.